Mmiri Spaniel America - Ihe to Ga-atụ Anya na Nzube Nkịta a - Reeddịrị
Mmiri Spaniel America (ma ọ bụ AWS, maka nkenke) bụ otu n'ime ụdị anumanu ole na ole mepụtara na America. Ihe ndekọ a pụrụ ịdabere na ya nke AWS malitere na 1865. Ọ bụ ezie na kpọmkwem ebe nkịta ahụ si malite esemokwu, ekwenyere na ya pụtara na mbụ na ndagwurugwu Wolf na Fox River nke Wisconsin, ma bụrụ nke mbụ akpọrọ Brown Water Spaniel ma ọ bụ American Brown Mmiri Spaniel. A na-enyo enyo na Curly Coated Retriever na Irish Water Spaniel so na ndị nna nna ya, na ikekwe Field Spaniel, ma ọ bụ kpochapụla Old English Water Spaniel.
E kwuru na ndị na-achụ nta ahịa n'okporo ụzọ ụgbọ elu Mississippi na ndịda mgbago ugwu ya ejiri ụdị a mee ihe nke ukwuu. Ndị a chọrọ nkịta egbe ga-arụ ọrụ nke ọma na marsh na ugwu. Uwe ahụ, akwa mkpuchi nyere aka kpuchie nkịta ahụ pụọ na mmiri oyi na ịta ahụhụ ihu igwe na-adịkarị na Oke Midwest, ma chebekwa ya pụọ ​​na briar n'ọhịa.
Usoro “ịwụli elu” nke bụ nke onye na-agba égbè ji arịgo na obere mmiri, maa jijiji ma na-agbawa ọbọgwụ, wee zigakwa nkịta ya ka ọ weghachite — ka a na-emekwa ebe niile n'akụkụ ọtụtụ osimiri na “olulu” ndị tụrụ ala ndị dị na mgbago ugwu Minnesota na Wisconsin. AWS nyere onwe ya na omume a, ebe ọ bụ na obere obere ya na uwe nchara niile nyere ya ohere ịbanye n'ime akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ mgbe dinta mere nwayọ ya. Thehụ nkịta ahụ n'anya nke mmiri mekwara ka ọ bụrụ ọkacha mmasị n'etiti ndị na-elekọta mink na muskrat traplines.
Site na iwebata nke buru ibu British retriever breeds na American ịchụ nta idaha, obere aja aja spaniel dara ihu ọma. Enweela dọkịta FJ Pfeifer nke New London, Wisconsin, nyere aka ịchekwa ụdị ahụ. Plọ Pfiefer nwere nkịta 132, ọ na-eresịkwa ụmụ nkịta 100 kwa afọ nye ndị dinta ruo Texas dị anya. O nyere mmesi obi ike na nkịta, mana ọ na-ekwu na ọ nweghị onye zụrụ ahịa jiri onyinye ahụ mee ihe.
Pfiefer mekwara otu ụlọ ọgbakọ ma nye aka mepụta ọkọlọtọ edere, nke meghere ụzọ maka nnabata United Kennel Club na 1920, Field Stud Book na 1938, na American Kennel Club na 1940. Nkịta Pfiefer nke ya, 'Curly Pfiefer' , bụ onye edebanyere aha ya na American Water Spaniel.
Mmiri America nke America Taa
N'agbanyeghị mgbalị ndị mbụ Dr. Pfiefer na ọtụtụ ndị ọzọ na-anụ ọkụ n'obi, AWS enwetaghachighị ewu ewu tupu Agha Worldwa nke Abụọ. Ọ na - anọgide na - adị obere ma nwee naanị ihe dị ka 3,000 ịdị adị n'oge ọ bụla. Naanị narị ole na ole ka edebara aha kwa afọ.
Ihe nlere niile na - enweta site na aka ole na ole fọdụrụnụ - ikekwe dịka atọ. A naghị amata AWS na mpụga North America. Ọbụna na United States, nkịta na ndị na-azụ ihe na-anọkarị na mpaghara Great Lakes. Edepụtara AWS dị ka nkịta gọọmentị nke Wisconsin na 1986.
AWS dịtụbeghị ewu ewu na mgbanaka ngosi dịka ọtụtụ ndị ikwu ya na-egwu egwuregwu. N'ihi nke a, enwebeghị nkewa dị ukwuu n'ọdịdị nke usoro vs. bench, na ụdị ahụ n'ozuzu ya jigidere ikike ịchụ nta ya. AWS karịrị ọtụtụ ndị na - ewepụta ihe dị ka mbara igwe, na-arụ ọrụ nke ọma na nke ọma n'ime oke egbe. Nkịta nwere imi siri ike 'spaniel' na ikike na-esi isi ọma. Ndị dinta nke oge a na-eji nkịta ahụ achọta ma weghachite egwuregwu dị iche iche dịpụrụ adịpụ, gụnyere pheas, grouse, grouseed, nduru nduru, woodcock, na ọbụna squir, hares, na rabbits.
Mana ọ bụ ọrụ ya dị ka onye nwere ọgụgụ isi, nke nwere akụnụba, mmiri na-atụgharị mmiri nke nyeere ụdị a aka ịchọta ọnọdụ dị nro n'obi ndị mmiri mmiri oge a. Enwere ike ichu AWS ngwa ngwa site na kanopi ma obu skiff n'enweghi iwe. N'agbanyeghị obere ya, nkịta ahụ siri ike ma nwee ike iweghachi nnụnụ buru ibu dị ka Canada geese. Nkwenye a, yana ụlọ nchebe ya ụlọ, emeela ka ọ nwee aha ọma ịbụ 'Chesapeake n'etiti ndị spaniels'.
Uwe mkpuchi ya na-eme ka ọ daba n'ọnọdụ mmiri oyi karịa spaniel ọ bụla. Na June 1992, AWS ghọrọ nke mbụ nke ụdị ya iji merie aha ịchụ nta site na Associationtù Na-ahụ Maka untingchụ nta North America.
A na-egosipụta ọdịdị dị iche iche nke ìgwè ahụ n'ọtụtụ ọrụ nke ndị nwe AWS na nkịta ha na-ekere òkè. Na Disemba 1993, AWS bu nke izizi nke ya iji merie aha mmeri Flyball site na North American Flyball Association. AWS ndị ọzọ 'na-ekere òkè na omume dịgasị iche iche gụnyere asọmpi nrubeisi, ọchụchọ na nnapụta, na ọbụna Schutzhund. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, enwekwu mmasị na AWS dị ka nkịta na-egosi.
Njirimara na Ọnọdụ
Mmiri American Spaniel bụ nkịta na-ajụ ase nwere ọdụ ogologo ogologo. Onu ogugu AWS bu 17 ″ ogologo ma buru ihe dika 38 lbs. Uwe aja aja na-amalite site na imeju ruo na chocolate gbara ọchịchịrị, ma na-agbachi ya anya dị ka Curly-coated Retriever’s, ma ọ bụ na omume rụrụ arụ, ụkpụrụ na-adịghị mma nke a maara dịka “marcel”.
AWS nwere ọgụgụ isi, nwee ọzụzụ, ma na-eguzosi ike n'ihe nye nna ya ukwu. Ọ na-adịkarị nwayọọ na ụmụ anụmanụ na ụmụaka, ma na-eme ezigbo anụ ụlọ. Nkịta na-adị enyi na ndị bịara abịa ndị webatara nke ọma. Ọ na - eme nche dị mma, ịdọ aka na ntị bụ ndị nwe ya na - eme mkpọtụ dị iche iche. Obere obere ya na-eme ka ọ daba na obere ụlọ obibi dịka ụlọ ndị dị n'obodo ukwu na ọbụna ụlọ. Mana dị ka ọtụtụ ụdị egwuregwu, o kwesịrị inwe mmega ahụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ọ hazie nke ọma.
AWS adịghị achọ ịnụ ụtọ dị ka ụfọdụ n'ime ụdị anumanu ndị ọzọ. Ọ na-abụ nkịta nwere otu onye. Ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-eto nwayọọ ma na-agwụ ike. Ọ na-enwe mmetụta nke mmetụta uche, ọ pụkwara ịbụ onye ihere ma ọ bụ malite 'na-ama jijiji' ma ọ bụrụ na e mesoro ya ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Nkịta nwere ọchịchọ ịgbọ ụja, mana nke a nwere ike ịkụda mmụọ na ọzụzụ kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ AWS ''yodel' mgbe obi dị ha ụtọ. Needfọdụ chọrọ ọzụzụ na-aga n'ihu iji belata ọchịchọ ebumpụta ụwa ha nke ịta ata, igwu ala, na ịwụli elu. Ole na ole na ndi ozo na ndi nkita.
AWS kwesiri inweta nrube isi irube isi. N'ihi na ọ na-abụ nkịta otu onye, ​​ọ naghị azacha nke ọma na ọzụzụ ndị ọkachamara belụsọ ma ọ bụrụ na emebere mmekọrịta ọha na eze na nwata. Nkịta nwere oke mmasị n’ebe ndị mmadụ nọ ma kwesiri ịzụlite ya n’ụlọ. Obi nkịta, ịdị nwayọ nke ntozu oke, na nnagide ihe mgbu dị elu nwere ike ime ka ụfọdụ usoro ọzụzụ ọzụzụ siri ike adịghị mma; mkpụmkpụ, kwa ụbọchị, nkuzi ọzụzụ na-aga n'ihu bụ ụzọ kachasị mma iji wepụta ikike AWS. A na-atụ aro ọzụzụ ọzụzụ.
Ọ bụ na Spaniels abụghị nnukwu nkịta ndị nwere ntutu isi na ọdụ nwere oke dịka ọdụ?
A na - eche AWS mgbe ụfọdụ na mmiri mmiri Spaniel nke Irish - ụdị yiri ya, nke na - adịghị ahụkebe yana curly topknot na isi ya, buru ibu buru ibu, na ọdụ, 'oke' ọdụ.
Gịnị kpatara ha ji enwe ọdụ ogologo? Ọ bụ na ọdụ ọdụ spaniel anaghị akwụsịkarị?
Ogologo ọdụ bụ akụkụ nke ụdị ọkọlọtọ. A na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ dị ka rodu na mmiri na-asọ ngwa ngwa.
Ya mere, ha bụ spaniels-ma ọ bụ ndị na-ewepụta ihe?
Ajuju a kewara AWS fanciers n'ime otutu ndi otu echiche di iche.
Iji nwee ike mpi na ule na ọnwụnwa ịchụ nta nke AKC kwadoro, a ghaghị ịkọwa AWS dị ka ma ọ bụ onye ọhụụ ma ọ bụ onye nlọghachị. AKC na-ele anya na klọb nne na nna nke ìgwè (na nke a, American Water Spaniel Club of America) iji mee mkpebi nhazi. N'ịchọ igosipụta ọtụtụ ụdị nke ahịhịa ahụ na ala opupu yana ala, AWSC rịọrọ ka ọ bụrụ nhazi abụọ. Nkọwa dị otú ahụ ga-emepewo igbe pandora maka AKC-obi abụọ adịghị ya na ọ ga-eme ka klọb ndị ọzọ na-achọ otu ọnọdụ maka nkịta ha. AKC jụrụ arịrịọ ahụ. Klọb nne na nna mechara họrọ ka edobe ụdị ahụ.
Otu ọzọ nke ndị na-akwado AWS-American Water Spaniel Field Association (AWSFA, http://www.awsfa.org, ma ọ bụ info@awsfa.org) - hibere na 1993, ma na-akwalite oke mmasị ha maka nhazi spaniel.
Ọ bụrụ na ọ na-eme ezigbo ụlọ akwa na enyi ịchụ nta, gịnị kpatara na ọ naghị adịkarị?
Ọtụtụ na-eche na AWS adịghị mma dị ka English Springer Spaniel a pụrụ iji tụnyere ya, ọ na-enweghịkwa imi siri ike nke Springer na ịsụ ọkụ. Nkịta n'ozuzu ya adịghị ka ihe a na-akpọ dị ka Labrador ma ọ nwere ike nwee nsogbu karịa ijikwa sọfụ mmiri, nnukwu mmiri mmiri, ogologo oge, wdg. Uwe ya nwere ike ịbụ ndọta maka anụ ụlọ, ma chọọ ndozi ọzọ site na dinta dị n'elu karịa nke ụfọdụ nke umu anumanu kariri ala.
Enweghị enweghị nhazi AKC nwere ike ịrụ ọrụ na ụkọ nkịta-ụdị ahụ abụghị n'ezie atụmanya maka onye na-agagharị n'ọhịa. Enweghị ngosipụta, n'aka nke ya, na-egbochi AWS pụọ n'anya n'anya ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu na ụmụ nwanyị. Ole na ole nkịta na-apụta na asọmpi AKC bench, nke na-egbochi ohere maka ndị nwe anụ ụlọ na ndị nkịta na-egosi ndị na-anụ ọkụ ọkụ ka ha bụrụ ndị AWS.
Enwere ule ma ọ bụ ọnwụnwa ịchụ nta ndị ọzọ maka igosipụta onyinye nke ìgwè ahụ?
AWS ruru eru ịsọ mpi na mmemme nke United Kennel Club, na North American Hunting Retriever Association, yana ule nke ndị nne na nna na AWSFA mere. Kpoo ndi otu di iche iche maka nkọwa banyere ule ma obu ubochi nyocha.
Ahụ ọ̀ dịkwa ha mma?
Enweghị ewu ewu (ya mere, enweghị ozuzu na-enweghị isi) enyerela AWS aka ịgbanahụ ọtụtụ ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-emetụta ụdị anụmanụ ndị ọzọ. Fọdụ ndị nwe oge ekwuola na nkịta ha achọbeghị ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ maka ọrịa. Ndepụta nke ọrịa na ọrịa ndị ọzọ amaara n'okpuru.
Ndi mmọ ẹduọk?
Dị ka ndị ọzọ na-eweghachi azụ, AWS nwere uwe mkpuchi abụọ nke na-echebe ya site na ihe ndị ahụ. Kootu nke dị n'ime ya dị mma ma na-eje ozi dị ka mkpuchi. Uwe elu ahụ dị oke njọ, na-asọ mmiri ma na-echebe nkịta megide briar na ugwu. Uwe mkpuchi a na-awụpụta na oge opupu ihe ubi, mana ọ na-apụta n'ụzọ dị mfe site na ịchachacha agba.
Uwe mkpuchi ha ha na-achọ ọtụtụ edozi?
Onu ogugu nke AWS bu ihe dika 1/2 ″ inch kariri nke Labrador Retriever. Na nkenke, otu ugboro n'izu nhicha zuru ezu iji mee ka ọ dị mma. Fọdụ ndị nwe ha na-eme ka nkịta ha belata oge iji gbochie ha ịkpa oke. Akwadoro ịsa ahụ mgbe niile maka nkịta ndị ahụ na-egwu mmiri mgbe niile, iji chịkwaa isi 'nkịta nkịta'. Fọdụ ndị na-achụ nta / ndị na-azụ ọzụzụ n'ọhịa na-eme ka nkịta ha belata n'oge oge ka uwe ahụ ghara iburu ọtụtụ burrs. Ndị ọzọ na-ete mmanụ n'ime kootu ahụ tupu ha agaa iji wepu iwe iwe ọkụ.
Ha dị hyper?
Dị ahụ na-adịkarị nwayọọ ma ọ bụrụ na a na-emega ahụ oge niile.
Ha enwere omume enyi?
Ọtụtụ nkịta nwere omume enyi, ọ bụ ezie na amabeghị ha maka ebigbọ ọdụ dị ka ụfọdụ ụmụ nwanne nne ha nwesịrị. Mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike ịchọta AWS nke nwere obi ụtọ ma ọ bụ nke nwere obi ọjọọ, mana nke a abụghị njirimara nke ụdị ahụ. Ndi AWS nwere otutu ihe na-adaba n'etiti ihe omimi nke English Springer Spaniel na nnwere onwe nke Irish Spaniel.
Nsogbu ahụike na ahụike
Ruo ọtụtụ iri afọ, AWS bụ 'ndị a kwakọbara' na ugbo Midwest, ma na-ahapụkarị onwe ha. Nke a rụpụtara nhọpụta ụfọdụ nke nhọrọ ahịhịa ebe naanị ndị kacha sie ike lanarịrị. Ọbụna taa, AWS ka bụ ezigbo ahụ ike dị ka nkịta si aga.
Ka o sina dị, ndị na-azụ ahịa nwa nkita kwesịrị ịzụlite naanị ndị na-azụ anụ na-enweta CERF anya anya na OFA ma ọ bụ PennHip hip nyocha na ngwaahịa ozuzu ha. Agbanyeghi na onodu nke Retinal Atughari na Hip Dysplasia n’etiti AWS ka di nkenke ma tunyere udiri anumanu yiri ya, oria abuo n’adighi ike. OFA, PennHip, ma ọ bụ CERF nhichapụ na nne na nna nwa nkita gị anaghị ekwe nkwa na nwa nkịta gị agaghị eketa ọrịa ndị ahụ, mana ule dị otú a bụ usoro kachasị mma maka ịbelata mkpokọta ọrịa ndị a na nkịta izugbe.
Edere ndepụta nke ọrịa na nsogbu ndị a site na nyocha nke ndị na-azụ AWS nke mba ahụ. Offọdụ n'ime ọnọdụ ndị a bụkarị ụdị nkịta niile (dịka allergies ma ọ bụ hypothyroidism). Ndị ọzọ na-apụta nnọọ obere oge (dịka hermaphroditism). Ndị ọzọkwa, dị ka alopecia (ntutu isi ha) adịghị akụda mmụọ ma ọ bụ na-eyi ndụ egwu.
Brindle Dog Breeds: Ndepụta nke 9 Canines Mara Mma & Agụ
Mara 57 nke kacha mma Golden Retriever mixes
ọkara German shepard ọkara ụlọ nyocha
enwere obere bulldogs french
aha maka ụlọ nyocha ojii
nkịta husky ọcha nwere anya na -acha anụnụ anụnụ
acha anụnụ anụnụ brindle french bulldog ọnụahịa